Ihe ị ga-ahụ na Berlin | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Berlin
Mariela Carril | | Berlin, Ihe ị ga-ahụ
Berlin Ọ bụ otu n'ime ndị kasị gara n'isi obodo nke Europe na ọ bụ ezie a priori Ọ naghị enwu dị ka Paris ma ọ bụ Vienna, eziokwu bụ na ọ bụ obodo mara mma ma nwee ọtụtụ ebe nkiri. O nwere ike ọ gaghị abụ ebe kachasị mma iji gaa n'oge oyi ma ọ bụrụ na ịmaghị ntu oyi, mana, n'oge a nke afọ, ọ dị mma.
Ka anyị lee kedu ihe ị ga-eleta na berlin.
2 Njem Nleta nke Berlin
Ọ dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ, bụ obodo kacha nwee ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya na ụbọchị site na ọkara mbụ nke narị afọ XNUMX. Ọ bụ isi obodo nke alaeze Prussia, Weimar Republic na nke atọ Reich, n'agbanyeghị na akara aka ya dị nwute ntakịrị mgbe njedebe nke Agha nke Abụọ mgbe e kewara ya mgbe e kewasịrị mba ahụ na mba abụọ.
Dị ka anyị kwuru n'elu Oge oyi bụ ezigbo oyiEnweghi anwụ ọ bụla n'ehihie, ụbọchị dị mkpụmkpụ ma enwere mmiri ozuzo mgbe niile na snowfalls na ifufe oyi na-agbadata Russia ma mee ka oge a bụrụ oyi.
Njem Nleta nke Berlin
anyị nwere ike ikwu banyere ụfọdụ iconic saịtị na na nleta mbụ na Berlin enweghị ike ịgbaghara. Nke mbụ bụ Reichstag. Buildinglọ a bụ na Tiergarten obi na bụ oche nke alaeze German n'agbata ngwụcha narị afọ nke XNUMX na mmalite nke XNUMX. Mgbe ahụ ọ bụ weim nzuko omeiwuar na kemgbe 1994 ọ bụ isi ụlọ ọrụ kwa afọ ise nke Mgbakọ Federal nke onye isi ala Germany choputara.
Emechara ya na 1894 ma nwee neo renaissance ịke. Aha ya apụtaghị ihe ọ bụla ọzọ karịa nzuko omeiwu ma wuo ya mgbe e guzobere Alaeze German mgbe nnukwu ụlọ dị mkpa iji kpọkọta ndị nnọchianya niile nke mba ahụ.
En 1933, otu ọnwa mgbe a họpụtara Hitler ịbụ onyeisi oche, ndị Reichstag rigoro n'igwe oku jiri ọkụ nke na-edozighi taa. Mgbe nke ahụ gasịrị, e mere ka ụjọ ọha ndị Nazi pụta, iwepụ ikike ndị mmadụ na ọgba aghara n'ime obodo nke anyị maaraworị etu o si kwụsị. Mgbe Agha nke Abụọ bisịrị, ụlọ ahụ lara n'iyi kpamkpam na gburugburu ya, a kụrụ ubi mkpụrụ osisi na-adịghị mma nke nyere ndị bi na ya nri.
Ka ọ na-erule etiti afọ 50s, e kpebiri iwughachi ụlọ ahụ n'ụdị dị larịị, nke siri ike, yana akara kwụ ọtọ na enweghị nnukwu mma. Taa enwere ike ileta ya ma ị ga-edebanye aha ya na ntanetị Nke mbụ. Enwere ike ịrịọ njegharị maka ọnwa dị ugbu a ma ọ bụ ọnwa abụọ na-esote.
La Ọnụ ụzọ ámá Brandenburg Ọ bụ nke abụọ anyị na-abịa. Ọ bụ foto akara ngosi na otu n'ime ụlọ akụkọ ihe mere eme nke lanarịrị oge na nke na-egosipụta nkewa nke mba n'oge Agha Nzuzo na ee, yana ụbọchị njikọta. Ọ bụ neoclassical ịke y e wuru ya n’agbata 1788 na 1791, nke Carl Gotthard Langhans mere, nke sitere na Acropolis nke Athens.
Ọnụ ụzọ Ọ dị mita 26 n’ogologo, mita 65.5 n’ogologo na mita 11 n’obosara na ogidi Doric isii. Na 1793 ọnụ ụzọ ahụ meriri otu quadriga, nke Napoleon buuru mgbe ọ wakporo obodo ahụ na 1806. Mgbe ọ hapụsịrị ihe oyiyi ahụ, ọ laghachiri na Berlin na n'ọnụ ụzọ ámá, ka ọ nọrọ n'akụkụ Soviet mgbe 1946. Ndị mmadụ mere Afọ Ọhụrụ nke 1989, na Fall of the Mgbidi, lee otu. Ọnụ Brazọ Bramá Branderburg anaghị emechi mana ezigbo echiche bụ ịga leta ya mgbe ọ na-akwado mmemme. Echefula ileta Branderburg Gate Museum.
La TVlọ Elu TV nke Berlin, nke a na-akpọkwa Fernsehturm, na-achịkwa skyline nke obodo ahụ 368 mita elu ma e wuru ya na 60s. N'oge nleta gị ị nwere ike ịnụ ụtọ a panoramic echiche mara mma site n'elu. Jiri kaadị njem nleta obodo ahụ, Kaadị Nnabata nke Berlin, ị nwere mbelata 25%. Iji nweta uru!
Lọ elu dị na Alexanderplatz ma jide aha nke ịbụ ndị kasị elu ụlọ na Europe na-emeghe ka ọha na eze. Ọ bụ naanị afọ anọ ka emere ya, ka ewebata ya n’October 1969. Ọ bụ Hermann Henselmann mere ya. Mgbe njikọta nke Germany abụọ ahụ, ụlọ elu ahụ abụkwaghị akara nke East Germany ma tinye ọnụ na Berlin. Taa, ọ na-anabata ndị ọbịa otu nde kwa afọ site na mba 86.
Ulo ihe nlere nke ulo oru TV nke Berlin di elu nke 200 mita na nwere a revolving mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ. Y’oburu n’atụmatụ ịga ụlọ oriri na ọ thisụ thisụ a, ọ kacha mma ịde akwụkwọ na ntanetị. Igwe Mbuli ahụ na-arịgo na naanị sekọnd 40 ma mgbe ịnụrụ ya, ị nwere ike ịkwụsị mgbe niile site na ụlọ ahịa onyinye ma were ihe ncheta gị. Lọ elu ahụ mepere site na Machị ruo Ọktọba site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo etiti abalị yana site na Nọvemba ruo Disemba site na 10 ruo etiti abalị.
Lọ elu a na-esochi Gendarmenmarkt, square nke dị nso na Friedrichstrasse na nke ahụ ụtụtụ na-atụkwasị ụlọ magburu onwe ya atọ nke obodo ahụ: ụlọ nzukọ egwu na katidral French na German, na Deutscher Dom na Französischer Dom. Ha abughi uka abuo, kama ha di elu. Otu n'ime ha nwere Huguenot Museum na nke ọzọ bụ ngosipụta na-adịgide adịgide nke akụkọ omebe iwu. Ọtụtụ na-ekwu ya Ọ bụ ebe kachasị mma na Europe na enweghị mgbagha na ọkọchị ọ bụ ebe ịnọ ogologo oge.
Mgbe agha ahụ gachara, square ahụ ghọrọ mkpọmkpọ ebe ma na 70s gọọmentị Berlin wughachiri ma degharịa ya na aha Platz der Akademie. Aha Gendarmenmarkt, nwere ya kemgbe njikọta ọzọ na 1991. Ọ bụrụ na ị gaa N'oge ọkọchị, square bụ ebe maka ikuku ikuku, ebube concerts, na ọ bụrụ na ị na-aga na oyi ọ na-akwado ndị Ahịa ekeresimesi.
Katidral Berlin malitere na ngwụsị narị afọ nke XNUMX ọ bụkwa ụlọ ụka Protestant kacha mkpa n’obodo a. Ọ bụghị katidral nke ọma mana ọ bụ ụka parish. Ọ bụ ụka nke usoro ndị eze Hohenzollern, ndị eze ukwu German na Prussia na ebe ọ nọ n'otu ebe enwere ihe atụ ọtụtụ narị afọ gara aga. O doro anya na chọọchị tara ahụhụ nke ukwuu site na bọmbụ nke Agha nke Abụọ mana eweghachitere ya kpamkpam afọ 44 gara aga.
Ka nwere ike ịga leta ma enwere njem nlegharị anya na nkeji iri abụọ ọ bụla: isi ụgbọ mmiri, Alụmdi na Nwunye Alụmdi na Nwunye, Hohenzollern Crypt na 20 sarcophagi site na narị afọ ise, ụlọ ngosi ihe nka na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahụ, steepụ nke alaeze nke na-arịgo 100 iji ruo elu dome ahụ lee obodo ahu na ukwu gi.
Ma ọ bụ na-agaghị eleta ndị Obí Charlottenburg, n'èzí obodo, ma na nchịkọta nke eserese China na poselin ndị mara mma, n'etiti ubi ndị na-adịchaghị ala na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ na-adọrọ mmasị. Na-ekwu okwu banyere ụlọ ihe mgbe ochie bụ Ebe ngosi ihe mgbe ochie, saịtị World Heritage dị ka UNESCO na isi ụlọ ọrụ nke Altes Museum, New Museum, Bode Museum, Pergamon Museum na Ochie National Gallery. Ihe karịrị puku afọ isii nke akụkọ ntolite na-etinye uche ebe a na nleta ọ na-adaba adaba ịnweta Kaadị Nnabata nke Berlin.
N'ikpeazụ, ịnweghị ike ịhapụ Berlin na-enweghị ịga na Ememe Ncheta nke Berlin na Ebe Ederede. Taa, ka ụwa na-aga n'ihu na-ewu mgbidi, anyị agaghị echefu ohere iji tụte nke a, nke bụ mgbidi a kacha mara amara na akụkọ ihe mere eme n'oge na-adịbeghị anya. Ọ dị n'etiti agbamakwụkwọ na agbamakwụkwọ Mitte, n'okporo ámá Bernauer, ọ nwere akụkụ nke mgbidi mbụ na ụlọ nche na-enye ohere ịmegharị n'ụzọ ụfọdụ ụwa nwere oke ala.
Dị ka ihe ncheta ị nwere ike mgbe niile nleta Potsdamer Platz na Kurfürstendamm, otu n'ime ebe kachasị iche maka ịzụ ahịa ma ọ bụ, ọ bụrụ na gị na ụmụaka aga, gaa na Zoo Berlin, nke kacha ochie na mba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Berlin » Ihe ị ga-ahụ na Berlin
Ihe ị ga-ahụ na Funchal
Ihe ị ga-ahụ na Menorca